Master of Business Administration (MBA) - YEC Education
MBA Application Form ရယူရန် အောက်ပါအချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။
Professional Master Program ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ဖြစ်သည်။ အကြမ်းဖျင်း MBA နှင့် eMBA နှစ်မျိုးရှိသည်။ Master of Business Administration (MBA) ကိုတော့ လုပ်သက်နှစ်နှစ်အနည်းဆုံးရှိပြီး စီမံခန့်ခွဲမှု နယ်ပယ်မှာ လုပ်ဆောင်နေသူများ သို့လုပ်ဆောင်မည့်သူများနှင့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်အများစု တက်ရောက်ကြပါသည်။ EBMA ကတော့ Executive MBA ဖြစ်သည်။ စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်မှာ ၈ နှစ်နှင့် ၁၀ နှစ်အထက်ရှိသူများတက်ရောက်ကြသည်။
👨‍💻Why MBA ?
MBA Program ကို လုပ်ငန်းစတင်ဖို့နှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့ လေ့လာကြပါတယ်။ အချို့ က Career အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ တက်ကြသလို အချို့က Management level ကိုတက်ရောက်ဖို့ တက်ကြပါတယ်။ နောက် networking အတွက်တက်ရောက်ကြသလို လုပ်ငန်းခွင်မှာ နောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ဖို့ MBA ကိုလေ့လာကြပါတယ်။
👩‍💻MBA တက်မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားသင့်သည့် အချက်များ
MBA ပေးအပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများစွာရှိပါတယ်။ MBA တက်ရောက်မယ်ဆိုရင် အဓိက ကြည့်ရမည့်အရာကတော့ Recognition & Accredition ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် MBA ပေးတဲ့နိင်ငံထက် အဖွဲ့အစည်းကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။ နောက်တက်ရောက်ရမည့် Duration နှင့် Timetable ကို ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့ အလုပ်နဲ့ တက်ရောက်ရမည့် timetable နှင့်မကိုက်ညီပါက စာလိုက်နိုင်မှုအပိုင်းမှာ အားနည်းနိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်ခုကတော့ ကုန်ကျစရိတ်ပါ။ MBA အများစုအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရမည့် ကုန်ကျစရိတ်မနည်းပါဘူး။ အများစုဟာ သိန်း ၁၀၀ အထက်မှာရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ ဘာ့ကြောင့် MBA ကိုတက်ရောက်သလဲဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိရမည့်အပြင် ကျောင်းပြီးရင် MBA ကိုအသုံးပြုပြီး ဘယ်လို career ဘယ်လို အလုပ်အကိုင်မျိုးကို လုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာ ကြိုတင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
👩‍💻Y.E.C Learning Center
Y.E.C Learning Center ရဲ့ Mission သည်လူတိုင်းဘဝကို ပညာရေးဖြင့်မြင့်တင်ဖို့ အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သည်မှာ ပညာရေးကို အဟိတ်အဟန်ထက် အစစ်အမှန်ပညာရေးသည်ပိုအရေးကြီးပါသည်။ ပညာသင်တဲ့အခါမှာ သင်ကြားသည့်ဆရာကောင်းရမည်၊ ပညာရေးကိုချီးမြင့်သည့်အဖွဲ့အစည်းခိုင်မာမှုရှိရမည်။ ပညာကိုအမှန်တကယ်နားလည်တက်ကျွမ်းသွားရမည်။
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း 2015 တွင် Working Professional များအတွက် Weekends မှာသာ ဖွင့်လှစ်သည့် Diploma များသင်တန်းများ မန္တလေးမှာ တက်ရောက်ဖို့အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် Y.E.C Learning Center ကို 1 June 2015 တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်များကို Working Professional များအတွက် စတင်ပို့ချခဲ့ပါသည်။ Diploma in Business Administration ဘာသာရပ်ကို မြန်မာပြည်မှာ အောင်ချက်အများဆုံးနှင့် ဂုဏ်ထူးအများဆုံးထွက်အောင် သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သော center လည်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိတွင် City of Oxford College (UK) နှင့် Lincoln University College (Malaysia) တို့နှင့် Learning Partner အဖြစ်ရှိနေပါသည်။
MBA Program ကို မဟာ Mandalay မှာပို့ချဖို့ Y.E.C Learning Center ၏ Founder & MD ဖြစ်သူ Dr. Phyo Paing နှင့် Malaysia အခြေစိုက် မလေးရှား နိုင်ငံ၏ အဆင့်မြင့် ပညာရေး၀န်ကြီးဌာနမှပေးအပ်ချီးမြှင့်ထားသော “5-Star 2017” Excellent Award ရ Lincoln University College ၏ Dr. Amiya Bhaumik (CEO & Vice-Chancellor) တို့ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။
👩‍💼Why Lincoln MBA
Lincoln University College သည် KPT (Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Ministry of Higher Education Malaysia) နှင့် MQR (Malaysian Qualifications Register)/ MQA (Malaysian Qualifications Agency).မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော ကျောင်းဖြစ်သည်။ Times Higher Education (THE) World University Impact Ranking အရ 2019 တွင် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ် (301-350) ပါဝင်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ် (9)ခုစာရင်းတွင်ပါဝင်ထားသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Lincoln University College (LUC) ဟု အတိုကောက်ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး Malaysia တွင် Campus နှစ်ခုဖြင့် ဆေးတက္ကသိုလ် နှင့် Medical Science အပြင် Business Management ဘာသာရပ်များကို ပို့ချလျက်ရှိပါသည်။ World Health Organization (WHO) တွင် registration လုပ်ထားခြင်း၊ International Association Universities (IAU) အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် Association of Commonwealth Universities (ACU) အဖွဲ့ဝင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ခြင်းသည် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင်ကျောင်းခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပြီး ယခု MBA Program သည် မလေးရှားအစိုးရ Malaysia National Accreditation Board ၏ Malaysian Qualifications Agency (MQA) မှ အသိမှတ်ပြုထားသည့် Program တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
2. Working Experience at least2years
သင်တန်းကာလ တစ်နှစ် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တွင်6Semesters ရှိပါမည်။
👨‍💻What are they going to learn?
အမှတ်ပေးမည့် ပုံစံနှစ်မျိုးပါရှိပါတယ်။ ၁. Continuous assessment နှင့် ၂. Summative assessement ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်ပေးမည့် ပုံစံမှာ Continuous Assessment (Assignment, case studies, presentation, attendance) အတွက် 50% နှင့် Summative Assessment (Exam) အတွက် 50% ဖြစ်ပါသည်။ Project Paper တင်ရမည်။ Semester တစ်ခု ( နှစ်လ)ကို နှစ်ဘာသာ သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး Exam နှစ်လ တစ်ခါရှိပါသည်။ Ph.D ဘွဲ့ရ အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များ နှင့် သင်ကြားရေး အတွေ့အကြုံ (၇)နှစ်အထက်ရှိသည့် Master ဘွဲ့ရဆရာများသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းအနေဖြင့် DBM သင်တန်းသားဟောင်များတောင်းဆိုသည့်အတွက် ယခု intake တွင် Dr. Phyo Paing ကိုယ်တိုင် နှစ်ဘာသာသင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
P.S – ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို မလေးရှားတွင် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
👩‍💻Payment Options သုံးမျိုးရှိပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက comment ပါ group တွင် join ထားနိုင်ပါသည်။
© 2021 YEC Education. All rights reserved